Movie zingase zihluke. Noma yimuphi ifilimu ezinhle uzothola izithameli, akunandaba - kungcono comedy, horror kanye romance. Umbandela main uyohlale into eyodwa - ikhwalithi umqondisi izisebenzi kanye ithalente. Bese - indaba ukunambitheka.
Abantu bakujwayele ukubona yeshashalazi uhlobo olufanayo amafilimu. Ngokuza cinema, indoda kakade azi ukuthi yini ezokwenzeka, kanjani kuzophela. Esikhathini amahlaya, ebona amahlaya abathathu esigcawini ngasinye e ibhayisikobho ethusayo - jumping izilo ngokucijile ezahlukene kanye nezipoki endaweni melodrama - indaba uthando. Omunye uthola umuzwa wokuthi cinema yesimanje ingasakwazi ukubamangaza labo ungafuni bachitha isikhathi sabo benza ku iphethini eziwubala. Nokho, akunjalo.
Kukhona amafilimu ukuthi bayakwazi nje kusimangaze umbukeli ongenalwazi. Bayakwazi okwesabisa ngempela hhayi ukukhala abukhali, kodwa into eyesabisa ngaphezulu. Zibonisa ezintweni isikrini kuso ingati ukusebenzisa abandayo, futhi umbukeli akakwazi ukukhuluma, ngoba okwenzekayo esikrinini nje akusho ncazelo, futhi sihamba zonke izinhlobo imingcele. Isibonelo okuphawuleka "Tusk" - ifilimu ngo-2014, udutshulwe uKevin Smith.
Ovamile abasha abahileleka ekuziphatheni podcasts futhi othanda amahlaya zokuziphatha okubi, ngamandla ukuba Canada interview insizwa ngephutha anqunywe umlenze wakhe ngenkathi idlala ngenkemba Samurai. Lapho befika kule ndawo, protagonist ethola ukuthi umfana wafa. Nokho, wayengafuni ukuya ngaphandle yokubika, ngakho uya endlini yezwe ukuba itilosi ubudala, ubani ngemva kwakhe okuningi izindaba ezithakazelisayo. Lo muntu ibonakala evamile amnandi exhegwini, kodwa eqinisweni kuvela ukuthi wangempela crazy, futhi umalugaju ...
I protagonist - Dzhastin Long
Esikhathini ifilimu, "Tusk," nabalingisi wadlala kahle, ikakhulukazi protagonist. Idlalwa ngu nomdlali wamabhayisikobho waseMelika Dzhastin Long, okuyinto kungabonakala amabhayisikobho amaningi njengoba umlingisi izwi, futhi izilaleli mass kungaba uphawu Umdwebo "Movie 43" futhi "Die Hard 4.0".
Justin wazalelwa emndenini uprofesa wefilosofi ngaleso sikhathi nalabo bangaphambili Broadway umdlali waseshashalazini. Umndeni sibe nezingane ezintathu, futhi ukhethe ubungcweti kumdlali, kodwa kwaba Justin ifinyelele ukuthandwa enkulu.
Manje umlingisi iminyaka engu-38, futhi ukwenza ngokuyinhloko umsebenzi ithelevishini, iqhaza emibukisweni ezihlukahlukene TV kanye ogawuthola.
Esikhathini ifilimu "Tusk", lapho abadlali esikhathini esiningi kufanele abanolwazi oluncane, uMichael Amapaki got indima Maniac, futhi babhekana nazo kakusekho udumo.
Amapaki izinkanyezi ku inani elikhulu amafilimu ezinhle, kuhlanganise "Django Unchained," "Kusukela Ukuhlwa Till Dawn", "Kill Bill" namafilimu eziningana owaziwa. Nokho, iningi lama-owaziwa amafilimu umlingisi ashaywa asekelayo izindima, kuyilapho uKevin Smith wamphathisa ekhaya futhi akalilahlile. Kuyaphawuleka ukuthi ngo-ifilimu kukhona yesehlakalo lapho iqhawe abasha Michael Parkes kakhulu ngempumelelo kudlalwa Math Shayvli.
Michael Amapaki manje engu-78 ubudala, futhi uyaqhubeka iqhaza somkah. Okwamanje, umlingisi ehilelekile imisebenzi eminingana ithelevishini, kanye ifilimu emfushane.
In the movie "Tusk", abadlali ababengebona abantu abaningi abadumile, konke kusenjalo kwakukhona omunye abadlali edume kakhulu isikhathi sethu - Dzhonni Depp. Ngokuvamile, le umlingisi ehilelekile opholile multi-million, kodwa "Tusk" sibe nohlelo lokusebenzisa imali elincane futhi azihloselwe ukuba iphrojekthi enkulu.
Noma kunjalo, iqiniso liwukuthi. Dzhonni Depp ukudlalwa ifilimu, futhi benza kahle, nakuba a baxgeki kakhulu sola kuye, engazi ukuthi kungani kobana ibandakanyeke nhlobo kule. Ukuthukwa kuyafaneleka, ngoba isikhathi esikrinini umlingisi ithole kancane, kodwa lokho akusho negate yokuthi umlingisi wakhe ocime ezihlekisayo, futhi lihlotshiswe ngendlela yalo le filimu. Kungakhathaliseki ukuthi uphumelele Dzhonni Depp, namanje "Tusk" uhlala omunye bands impikiswano kakhulu emsebenzini wakhe.
Mayelana actress American Dzhenezis rodrigez uthi into ekhethekile, njengoba ifilimu "Tusk", ogama nabalingisi Akudingekile eziningi nakho ngemva kwakhe, Eqinisweni, kulapho lapho iphrojekthi lokuqala ucishe emikhulu ukuze alale naye. On indima Genesise yena abhekana kahle futhi emva kudlalwé ifilimu wathatha ingxenye kwelinye phrojekthi uKevin Smith, owayeneminyaka isinde.
Painting "Tusk" lithole Izibuyekezo okuxubile esusela izilaleli futhi baxgeki. Isizathu salokho, yebo, ukuthi ifilimu iyashaqisa ngempela futhi abakwazi ukushiya nandaba ngisho izilaleli eyinkimbinkimbi kakhulu. Kusukela le mpendulo, njengoba umthetho, iya ukweqisa: abanye bakholelwe ukuthi ifilimu - wobuciko wangempela auteur cinema, kunencazelo ejulile futhi lihlobene, futhi labo ukugxeka ke, abaqondi lutho. Abanye bathi umqondisi ikude kakhulu ne unya, ngakho ifilimu eshiya i aftertaste ezingemnandi, futhi ngokuvamile abanconywa ukubukela umuntu enempilo.
Kunoma ikuphi, le filimu okubi noma okuhle, njalo umbukeli ngeke ukuzinqumela ngokwabo bebodwa, kodwa yini wena ngokuqinisekile Kuyaphawuleka ukuthi isithombe ngeke abashiye ubani nandaba. Kufanele kuqashelwe ukuthi abantu izwele ikakhulukazi, ikakhulukazi izingane, wokubuka is hhayi Kunconywa. "Tusk" - ifilimu abadala abakhathele of movie banal futhi ufuna into entsha futhi engavamile.
Ukwakha umzimba zomzimba: "puree Amaphrotheni"